शब्दधाम : घाम झुल्किनुअघि (कथासङ्ग्रह)
समाजमा नङ्याउनु पर्ने मानिसहरु अझैसम्म पनि नाङ्गिन सकेका छैनन् । शोषण, अत्याचार र भ्रष्टाचारको भर्‍याङ्गमाथि चढेर बनेको ‘इज्जत र प्रतिष्ठा’ लाई समाजले अझैसम्म पनि आवश्यक घृणा गर्न सकेको छैन । अर्थात्, हामीले समाजलाई त्यो स्तरसम्म चेतना सम्पन्न बनाउन सकेका छैनौं । समाज रुपान्तरणका निम्ति भिन्न भिन्न क्षेत्रबाट क्रियाशील हामी सवैका लागि यो ठूलो चुनौतिको विषय हो । यही चुनौतिलाई सामना गर्ने प्रयत्न स्वरुप आजभन्दा डेढ दशक अघि मैले कथा विधामा हात हालेको थिएँ । सत्य, न्याय र परिवर्तनको पक्षमा बहस गर्न कथा अत्यन्त प्रभावकारी विधा हो भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।
“हाम्रो पार्टीको आदरणीय नेताको सालिक नराख्ने हो भने यहाँ हामी कसैको पनि सालिक राख्न दिँदैनौं ।” रंगध्वजले सभामा चुनौति र धम्कीका शब्दहरु वर्षाए । सभामा मानिसहरुको उपस्थिति अत्यन्तै कम थियो । उसले सभाको यो हालतको कल्पनासम्म पनि गरेको थिएन । सभामा रंगध्वजले औंला सोझ्याएर मान्छेहरुको गिन्ती ग¥यो । एक.. दुई..., चौध.... पन्ध्र । फेरि ग¥यो । उही पन्ध्रजना ।
विहान उज्यालो हुनेबित्तिकै फ्रस्टेड बौलाहाको मृत्यु बजारवासीहरुका लागि असामान्य समाचार बन्यो । धेरैले‘होइन होला’ भनेर शंका व्यक्त गरे । बजारका प्रायः सबै मानिसहरुको अनुहारमा चिन्ताका धर्साहरु देखिए । रंगध्वज र उसका केही सहयोगीहरु भने केही हतास भएजस्ता देखिन्थे । बौलाहाको मृत्युको जनचासोले झन् उनीहरुको हतासपन बढ्दै गयो । यी दुवै प्रतिक्रियाहरु त्यहाँ प्रष्टै देखिन्थे र बुझिन्थे ।
माइलीले सानैमा देखेको एउटा घटना सम्झी– ‘एक दिन विरालोले घरको मझेरीमा एउटा मुसो मारेछ । मुसोलाई हिंड्न र चल्न नसक्ने बनाएपछि विरालोले खानुभन्दा पहिले छोड्दै... हिंड्दै केही टाढा जाँदै, आउँदै गथ्र्यो ।’ यो घटना उसलाई त्यस्तै लाग्यो ।
भोलिपल्ट राति उस्तै उस्तै लुगा लगाएर आउने मान्छेहरूको एक हुलले मास्टर काकालाई कति क्रुरतापूर्वक मारे, त्यो तपाईलाई मैले भनिरहनै पर्दैन । त्यो त तपाईलाई थाहै छ । मास्टर काकाको छोरा नरेश भाईले एकदिन म सँग खुसुक्क भनेको थियो, त्यहाँ तपाई पनि हुनुहुन्थ्यो अरे । तर तपाईले अनुहारलाई खै ! किन हो एउटा रूमाल बाँधेर मुख छोप्नु भएको थियो रे ! बन्दुकको कुन्दाले मास्टरकाकाको टाउकै टाउकोमा हान्दा नरेशले तपाईसँग ठुलो बुवा बाबालाई नमारी दिनुस्, हामी जे भनेपनि मान्छौ भनेको थियो रे तपाईसँग । नरेशले यो कुरा स्कूलमा मेरो कानमा खुसुक्क भनेको थियो । उसले मलाई बाबालाई मार्न ठुलो बुवा पनि आउनु भएको थियो भन्थ्यो । जति छोप्न खोजे पनि बाबा ! तपाईलाई त सबैले चिनेछन । मास्टर्नी काकीले तपाईलाई चिनेपछि तपाई भित्तामा छेलिनु भयो रे ! होईन ? मास्टर काकालाई तल देविथानको रूखतिर मार्न लैजादा तपाईले मास्टर काकालाई गाली गर्दे लगेको तपाईको स्वर त, गाउँका सबैले चिनेछन् नि ! मास्टर काकालाई गोली हान्ने बेलामा पनि तपाईंले तँ माओवादी नै होस् भनेर जथाभावी गाली गर्नु भयो रे ! होइन ? घरबाट तल देविथान सम्म पु¥याउँदा मास्टर काकालाई बन्दुकको कुन्दाले जथाभावी घोच्दै लानु भयो रे ! होइन?
धेरै पढाउनुपर्छ, बिहा गर्न हतारिनु हुँदैन भन्ने मान्छेले किन अचेल यस्तो कुरा गर्छ ? उसकी स्वास्नीको धारणा पनि छोरीलाई नपढाउने नै थियो । रबुवाको हिजोआजको भनाइप्रति उसकी स्वास्नी खुसी देखिएकी थिई । त्यही दिनदेखि छोरीको विवाहका लागि आप्mनो माइत कमलाखोंचतिर खबर पठाएकी थिई उसले । विवाह कसरी गर्ने? केले गर्ने ? यो प्रश्नको उत्तर भने उनीहरुसँग कतै पनि थिएन ।
“अब तिमी र म सँगसगै गाईवस्तु चराउने दिन पनि सकिएजस्तो छ । मेरो सिधौलीको केटासँग विवाह हुने कुरा छ ।” रामवतीले जामुनलाई आज पहिलो पटक आप्mनो बारेमा सुनाई । “किन तिम्रो मुख त अँध्यारो भयो ?”रामवतीले जामुनलाई अलिक बुभ्mन खोजी र अलिकति कोट्ययाएर सोधी ।
“कोही नभएको एउटा टुहुरो मान्छेसँग ।” रबुवाले शंका व्यक्त ग¥यो । “उसको कोही नभएकाले के फरक पर्छ र ।”उसले अविचलित निर्णय सुनाई । रबुवाले स्वास्नीसँग सहमतिको संकेत माग्दै उसको अनुहारतिर हे¥यो । उसकी स्वास्नी पनि रबुवाको मुखतिर फर्केर हाँसी ।
कश्यपको सपनाको संसार अमेरिकाको ट्वीनटावर भत्केभैmँ निमेषभरमै भत्कियो । उसले एकपटक आफ्ना सपनाहरू सोच्यो– ‘पहाड जाने, खेतबारी किन्ने, घर बनाउने, विवाह गर्ने यस्तै यस्तै सपनाहरू...’
‘माउत्सेतुङ्ग भन्ने मान्छेका अनुसार माओवादीले कामै गरेका छैनन् भन्छनन् धेरै मान्छेहरु । उसले त जनताको चित्त नबुझाई केही पनि लिनु हुँदैन भन्थे रे !’ माइलीले तर्कको अर्को झटारो हानी । ‘हामीले के लुटेर खाएको छ देख्नुभा छ’ पछिल्तिर बसेको छापामार आक्रमक देखियो । ‘जनताले चित्त बुझाएर दिएका छैनन् ।’माइलीले पनि कडा स्वर पारी ‘माइली दिदी अब झन तिमी यहाँ बस्न गाह्रो हुन्छ ।’ हामीसँग हिँडे हुन्छ । अप्सराले माया गरे जस्तो गर्दै भनि ।
मिर्मिरे, बर्ष ३२: अंक : १ पूर्णाङ्क: २६०, २०६४ वैशाख
“पहिलेजस्तै हुने हो कि ?” मैले फेरि सम्भावित भविष्यलाई अविश्वास गरें । कतै विमलराज शर्माले जस्तै त नगर्लान् । विमलराज शर्मा पनि गाउँमा आफूले र आफ्नो परिवारले चिनेजानेकै मान्छे थिए । म पढेकै विद्यालयबाट उनले पहिलो पटक एस.एल.सी. पास गरेका थिए । उनको पालाका साथीहरु कोही शिक्षक छन्,कोही हलो–कोदालो गर्दैछन् । उनी परार एक पटक गाउँ गएका थिए । म भरखर एस.एल.सी. पास गरेर तत्कालै स्थापना भएको गाउँको कलेजमा आइ.ए. अध्ययन गर्न थालेको थिएँ । हामी विद्यार्थी र गाउँलेहरु मिलेर उनको ठूलो स्वागत–सत्कार ग¥यौं । उनी काठमाण्डौं गएर महाप्रबन्धक भइसकेका मान्छे । त्यही बेला हामीलाई उनले आइ.ए. पास भएपछि जागिर मिलाइदिने आश्वासन दिएका थिए । हामीले त्यो आश्वासनलाई जागिरको नियुक्ति पत्रझैं ठानेका थियौं । आइ.ए.को रिजल्ट आउनेबित्तिकै म उनकै आशले काठमाण्डौ आएको थिएँ । आमाले भन्नुभएको थियो– “ठूला मान्छेकहाँ जाँदा खालि हात जानुहुँदैन ।” त्यसैले मैले फेरि ऋणमाथि ऋण थप्दै एक पाथी घिउ ल्याइदिएको थिएँ ।
‘यो ठाउँ पहिले कमरेड ऋषि देवकोटा ‘आजाद’को कार्यक्षेत्र रहेछ ।’... हिँड्दाहिँड्दै बोल्दै थियो कमरेड विकल ।
“ऊः त्यो मान्छेलाई गोली लाग्यो... लाग्यो ... ।” गोली चल्नेबित्तिकै भीड तितरवितर भयो । गोली लागेका मानिसहरुलाई कोही बोक्न खोजिरहेका थिए । एउटा युवक नभाग्नुस्– नभाग्नुस् भन्दै छेउमा कराइरहेको थियो ।
“पार्टीको यो निर्णय राम्रो त होइन, तर ...” कमरेड रमण बोल्न खोज्दै थिए ।
Posted by शब्द-यात्रा at 12:00 AM
सेतो दरबारको छेउबाट (कवितासङ्ग्रह)